Mba menatra amin’izay e! • AoRaha
Mba menatra amin’izay e!
Na teo aza ireo ezaka vitan’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly notarihin’ny tale jeneraly Andriamifidy Jean Louis teo aloha, dia mbola azo lazaina fa maro ny ezaka miandry ny tale jeneraly vaovao Andrianirina Laza Eric. Mbola maro mantsy ireo tompon’andraikitra tsy menatra sy tsy matahotra manao ny tsy fanao any amin’ireny biraom-panjakana samihafa ireny. Tsy hay raha hoe zatra ny lalandririnina, na ny fitiavam-bola no diso tafahoatra.
Manafintohina sy mankarary sofina mihiitsy ny mihaino ireo mpiasa sy tompon’andraiki-panjakana ambonimbony sasany rehefa hitaky vola an-kolaka na hanao kolikoly izay izy ireo. Eto dia tsy hanonona birao na sampan-draharaha isika fa mahatsiarova tena ianareo mpanao lalankitan-kisoa. Ny soson-kevitra kely hampihenana na hanafoanana ireo fomba ratsy ireo no haroso.
Hoy ireo mpiasam-panjakana sasany rehefa mila raharaha ianao ka tsy maintsy handoavam-bola ilay izy: “ireto ny vola tsy maintsy aloanao ary afaka iray volana na roa volana farafahaingany vao hivoaka ny taratasinao raha hanaraka ny ara-dalàna ianao. Azo atao ihany anefa ny mifampiresaka amin’ny lehibenay raha tsy takatrao io vola na somary maimaika ianao”. Misy indray ireo milaza fa “mba hahafahana manafaingana ny taratasinao na ny dosienao dia tokony hantsoina matetika ry zalahy any ambony any, ka mila “credit” na lasantsy kely aho, ary mba mila tsipazana kely koa ry zalahy hikarakarany azy haingana…” Mba hanafoanana io fomba ratsy mahazo faka any an-dohan’ny mpiasa sasany io dia tsara raha atao peta-drindrina ny sokajin’ny vola aloa arakaraka ny fepetra tokony harahina samihafa, tahaka ireny amin’ny fandefasana vola amin’ny finday ireny. Ankoatra ny fametrahana peta-drindrina ireo sara tsy maintsy haloa rehetra ireo dia tokony hafainganina araka izay tratra koa ny fanaovana asam-panjakana ilain’ny vahoaka rehetra indrindra fa ny tsy maintsy ampandalovina aty amin’ny foibe aty Antananarivo. Ny fitarazohan’izany no mitarika sain-dratsy amin’ireo mpiasam-panjakana sasany. Isan’izany ny famoahana ny vokatry ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana; ny fiandrasana dosie ampandalovina antanantohatra samihafa na miandry ny vokatry ny fitsirihana ifotony (tany, fiara…) tsy maintsy ataon’ireo mpiasam-panjakana sasany…
Ankoatra izany, dia mbola tazana eny amin’ireny lalam-pirenena ireny ny fanolorana an-tsokosoko vola ho an’ireo mpitandro filaminana. Indraindray atao any anaty gazety, na mody mivadika any aorian’ny fiarakodia na mody mifandray tanana ry zalahy mifanolotra ilay arivo ariary na roa arivo ariary. Santionany amin’ireo fomba ratsy mahazatra ireo mpiasa sasany ireo, fa tsara hamafisina kokoa ny fandraisana andraikitra mba hanafaizana ireo mbola manao an’Andriamanitra ho tsy misy. Mba handrosoan’ity firenena ity sy hialana henatra amin’ny filaharana ratsy eran-tany dia any aminao andriamatoa tale jeneraly vaovao ny baolina. Mba menatra amin’izay koa ry mpanao kolikoly a!
Fitanana am-ponja vonjimaika :: Misedra tsy fahasalamana ny loholona Berthin Randriamihaingo